Ogaden News Agency (ONA) – Warbixinta Shirkii lagu soo dhaweeyay Wufuuda Madaxda JWXO ee ku sugan Wadanka UK
Warbixinta Shirkii lagu soo dhaweeyay Wufuuda Madaxda JWXO ee ku sugan Wadanka UK
Posted by ONA Admin	/ May 10, 2015
Shir wayn oo lagfu qabtay magaalada London oo lagu soo dhaweeyay Madaxda JWXO
Daawo: Sawiradiii Shirkii laguu soo dhaweeyay Wufuuda Madaxda JWXO uu ku sugan Wadanka UK
Maalinimadii sabtida ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 09/05/2015, waxaa magaalada London ee waddanka UK lagu qabtay shir aad u ballaadhan oo si wayn loo agaasimay, kaasoo ay ka soo qayb galeen madax badan oo tirsan Guddiga Fulinta iyo Golaha Dhexe ee Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (JWXO), oo uu horkacayo guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan, iyo ku xigeenkiisa Maxamed Ismaaciil Cumar.
Shirkan, oo lagu qabtay xarunta Jaaliyadda Ogaadeenya ee London, waxaa sidoo kale ka soo qayb galay dadwayne aad u badan oo isaga yimid gobollada dalka UK iyo kuwo kale oo iyaguna ka yimid qaar ka mid ah wadammada Yurub. Waxaa kaloo shirka ka soo qayb galay wafdi ballaadhan oo ka socday Urur Soomaaliyeed oo lagu magacaabo AAYO-SOOR, kaasoo u taagan midaynta iyo isu keenidda dadyowga Soomaaliyeed.
Shirka wxaa lagu furay Aayado Quraan ah, ka dibna waxaa khudbado aad u qiimo badan ka soo jeediyay madaxda Ururrada Bulshada Ogaadeenya, oo ay ugu horreeyeen kuwo ka socday Ururka Haweenka Ogaadeenya. Masuuliyiinta Ururka Haweenka Ogaadeenya waxay ka warbixiyeen marxaladaha uu Ururku soo maray iyo kaalinta hormuudka ah ee Haweenku ay had iyo goore kaga jireen halganka gobonnimodoonka, ilaa iyo haddana ay kaga jiraan.
Markii ay Ururrada Bulshadu hadleen, ayaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay guddoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan. Guddoomiyuhu wuxuu u mahad celiyay marti sharafta ka soo qayb gashay shirka, ka dibna wuxuu jeediyay khudbad dheer oo taabatay dhinacyo kala duwan oo la xidhiidha halganka Ogaadeenya iyo maraxladda hadda la marayo iyo sida loogu baahan yahay in dadaalka la sii kordhiyo, si gush la soo dedajiyo.
Guddoomiyuhu wuxuu khudbaddiisa ku sheegay in gumaysiga Itoobiya uu ku guuldarraystay qorshayaashii uu damacsanaa inuu ka fuliyo dalka Ogaadeenya, iyadoo ay ugu wacan tahay siyaasadda tolmoon ee JWXO ay ku hagayso halganka Ogaadeenya. Guddoomiyuhu wuxuu tilmaamay in JWXO ay gumaysiga kaga adkaatay goobaha dagaalka iyo kuwa siyaasadda labadaba. Wuxuu faahfaahiyay guulaha is-dabajoogga ah ee CWXO ay ka soo hoyiyaan goobaha dagaalka iyo sida ay nafis ugu diideen ciidammada faraha badan ee Itoobiya ay ku daabushay dalka Ogaadeenya.
Guddoomiyuhu wuxuu kaloo ka warramay guulaha siyaasadeed ee Jabhaddu ay ka gaadhay maxfallada adduunka, kuwaasoo horseeday in wadammada caalamku, gaar ahaan kuwa Yurub, ay ogaadaan denbiyada ay dadwaynaha ka gasho xukuumadda gumaysiga Itoobiya iyo sida ay xadgudubto xuquuqda aadahana. Wuxuu carrabka ku dhiftay dhagaysiyadii dhawaan lagu qabtay xarunta Baarlamaanka Midowga Yurub iyo digniinta uu Barlamaanka Midowga Yurub u jeediyay xukuumadda gumaysiga, isagoo doorashada Itoobiya ku tilmaamay mid aan lagu kalsoonaan Karin.
Guddoomiyuhu wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay baaq uu u jeediyay xubnaha JWXO, kuwaasoo uu ku dhiirri galiyay inay dadaalkooda sii labanlaabaan oo ku dadaalaan sidii ay u fulin lahaayeend hammaan qorshayaasha iyo barnaamijyada Jabhadda. Wuxuu kaloo dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ka codsaday inay midnimadooda adkeeyaan oo meel uga soo wada-jeestaan gumaysiga nacabka ah ee dalkooda haysta.
Shirka waxaa sidoo kale ka hadlay guddoomiye ku xigeenka JWXO mudane Maxamed Ismaaciil Cumar, oo isaguna ka hadlay marxaladihii uu halganku soo maray iyo caqabadihii laga soo gudbay. Guddoomiye ku xigeenku wuxuu si cilmiyaysan uga hadlay marxaladaha kala duwan ee halganku soo maray iyo marxalad walba qaabkii lagaga soo gudbay. Wuxuu ka hadlay xilliyadii uu halganku Soomaali oo dhan ka dhexeeyay ee Soomalida Ogaadeenya ay horseedka ka ahayd.
Wuxuu kaloo ka hadlay xilliyadii uu halganku ku tiisanaa dowladdii Soomaaliya iyo guulihii la gaadhay ama dhibaatooyinkii lagala kulmay iyo xilligii ka denbeeyay ee halganka lagu saleeyay mabda’ isku tashiga ee JWXO ay horseedka ka tahay, isagoo tilmaamay in marxaladdani ay tahay mraxaladdii ugu fiicnayd ee halganka Ogaadeenya uu soo maray, iyadoo dadwaynaha Ogaadeenya ay si dhab ah gacanta ugu hayaan halgankooda, isla markaana ayna jirin cid kale oo saamayn ku leh go’aan qaadashadooda iyo qaabka ay hawlaha halganka u maamulayaan.
Guddoomiye ku xigeenku wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in hadda la joogo xilligii la guda gali lahaa marxalad cusub oo halganku galo, taasoo ah in dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya iyo Jabhaddoodu ay hormuud ka noqdaan dib u soo celinta dareenkii soomaalinimo iyo dadka Soomaaliyeed gacan laga siiyo sidii ay uga xoroobi lahaayeen faragalinta qaawan ee gumaysiga Itoobiya uu ku hayo arrimahooda gaarka ah iyo sidii ay danahooda Qaran ugu midoobi lahaayeen.
Shirka waxaa sidoo kale ka hadlay masuul u hadlay Ururka AAYO-SOOR oo lagu magacaabo Faysal, kaasoo ka hadlay taariikhda dadka soomaaliyeed iyo meeqaankii ay ku lahaan jireen gobolka Geeska Afrika. Wuxuu sheegay in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin taariikh aad u xeel-dheer iyo dhaqan soo jireen ah, hase yeeshee nasiib darro ay maanta u muuqdaan inay yihiin dadka ugu liita dadyowga gobolka ku dhaqan, taasoo ay ugu wacan tahay hoggoomin xumo iyo dhaqankoodii iyo taariikhdoodii oo ay seeg-seeg galiyeen.
Wuxuu dadka soomaaliyeed, meel kastoo ay joogaan, ugu baaqay inay mar kale ka shaqeeyaan sidii ay sharaftooda iyo sumcaddooda u soo celin lahaayeen, isla markaana ula soo noqon lahaayeen kaalitii hormuudka ahayd ee ay ku lahaayeen gobolka. Taasina waxay ku iman kartaa oo kaliya inay danahooda u midoobaan ooh al meel uga wada-jeestaan cadowgooda taariikhiga ah ee Itoobiya.
Shirkani wuxuu ahaa mid agaasinkiisa iyo maamulkiisaba aad loogu bogay, waxaana ammaan aad wayn loo soo jeediyay Jaaliyadda Ogaadeenya ee London, iyo gaar ahaan guddigii qabanqaabada u qaabilsanaa.
Xubnihii Gudida Fulinta iyo Golaha Dhexe ee JWXO ee shirkan kazoo qeyb galay waxaa kamid ahaa
1: Guddoomiyha jwxo Admiral Maxamed Cumar Cisman
2: Guddoomiye Kuxigeenka jwxo Dr Maxamed Ismaaciil Cumar
3: Mudane Cabdiraxman Sheikh Mahdi
4: Mudane Maxamed Cabdi-yasiin Diirane
5: Mudane Axmed Yasii Sheikh Cabdi
6: Mudane Xasan Macalin
7:Marwo Khaalisa Ugaas Mahad
8: Mudane Cisman Badal
9: Mudane Daahir Tamuuje
Xubnihii Jaaliyada Ogadeniya ee ka hadlay Shirkan waxaa kamid ahaa:
1: Mudane Yuusuf Jaamac Qabile – Gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee London
2: Rosa Cabdiraxman -Dallada Guud ee UHO
3: Sooc Axmed Nuur- Dallada UHO London
4: Koos Shariif Hasan- Dallada UHO Europe.
5: Xoghayaha Ururka OYSU Europe